လူထဲက သမိုင်း၊ သမိုင်းထဲက လူ
Posted by ashin kusalasami on October 21, 2010
“လူက သမိုင်းကို ဖန်တီးတာလား၊ သမိုင်းက လူကို ဖန်တီးတာလား”
ဖြစ်တည်မှုပဓာန၀ါဒီ ယန်းပေါဆတ်က “ဖြစ်တည်မှုသည် အနှစ်သာရထက် ရှေ့ကျတယ်”ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပြင်သစ်ပြည်သူတွေကို လှုပ်နှိုးလိုက်တယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ “လူဆိုတာ ထာဝရဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဦးဦးက ဖန်ဆင်းထားပြီး အရာရာကို သူကပဲ ကြိုတင် စီမံကိန်း ချထားပြီးသားဖြစ်တယ်”လို့ ယူဆနေတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းခံဝါဒီများကို တုန်လှုပ်သွားစေခဲ့တယ်။ “ဖြစ်တည်မှု”ဆိုတာ လူသားတွေ၊ တိရစ္ဆာန်သတ္တ၀ါတွေနဲ့ အရာဝတ္ထုများရဲ့ ပကတိတည်ရှိမှုပဲ ဖြစ်တယ်။ အဓိကဆိုလိုရင်းကတော့ ဒီနေရာမှာ လူသားပဲ ဖြစ်တယ်။ အနှစ်သာရဆိုတာကတော့ အဲဒီဖြစ်တည်မှုတွေကနေ သတိ၊ ၀ီရိယ၊ ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ ထုတ်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အရာပဲ ဖြစ်တယ်။ အများစုက လောကထဲမှာ ဖြစ်လာတဲ့အရာရာတိုင်းဟာ သူ့ဟာသူပဲ ဖြစ်နေတယ် သို့မဟုတ် တန်ခိုးရှင်တစ်ဦးဦး စီမံတဲ့အတိုင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ယန်းပေါဆတ်ကတော့ လူဆိုတဲ့ ဖြစ်တည်မှု ရှိလာပြီဆိုရင် အနှစ်သာရလို့ဆိုတဲ့ အောင်မြင်ခြင်း၊ ကျရှုံးခြင်းစတဲ့ အနှစ်သာရအဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးကို မိမိတို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြုပြင်ဖန်တီးယူလို့ ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။
အဲဒီအခါက ပြင်သစ်လူငယ်တွေဟာ နာဇီတွေ ပြုသမျှ နုနေရတယ်။ ဒါကို ဘယ်လိုမှ တွန်းလှန်လို့ မရဘူးဆိုပြီး လက်မှိုင်ချနေကြတဲ့အခါ ဖြစ်နေတယ်။ သူ့စကားကြောင့် ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ လက်ခံပြီး အားတက်သွားခဲ့ကြတယ်။ ဒီတော့ ပြောချင်တာက ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် အရာအားလုံးဟာ လူက ဖန်တီးလို့ ဖြစ်လာတာ။ လူသည် ပထမ၊ အဖြစ်အပျက်သည် ဒုတိယ။ လူသည် ဖန်ဆင်းရှင်၊ အရာအားလုံးသည် ဖန်ဆင်းခံ။ ဒီတော့ သမိုင်းဆိုတာ လူသားတွေရဲ့ ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယများထဲက ထွက်ကျလာတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့က သီရိလင်္ကာသားတစ်ယောက်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စကားပြောနေကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ပြောနေကြတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေတွေအပေါ် စိတ်ပျက်မိကြောင်း၊ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ၊ …..တွေ၊ …. များစွာ ဖြစ်နေကြောင်း ပြောဖြစ်နေကြတယ်။ အခုလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရှင်ဆိုတဲ့ သူတွေကပါ ဆိုးဝါးတဲ့အာဏာရှင်များဘက် ရပ်တည်နေကြကြောင်း၊ အများပြည်သူကောင်းစားရေးအတွက် ကိုယ့်အသက်နဲ့ မိသားစုဆင်းရဲပင်ပန်းမှုတွေကို စတေးထားတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာ ထောင်ထဲမှာ ဘာအပြစ်မှ မရှိဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အကျဉ်းချခံနေရကြောင်းများကိုလည်း စိတ်ပါလက်ပါ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီလို ပြောနေစဉ်မှာ သီရိလင်္ကာသားက “မင်းတို့ နိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိလဲ”လို့ မေးတယ်။ “သန်း ၅၀-ကျော်၊ ၆၀-နီးပါး”လို့ဆိုတော့ “စစ်သားကရော ဘယ်လောက်ရှိလဲ”လို့ မေးတယ်။ “၅-သန်းခန့် ရှိမယ်ထင်တယ်”လို့ ဖြေလိုက်တော့ “ဟာ …. ဒါဆို မင်းတို့ ညံ့တာပေါ့”လို့ ပြောလိုက်တယ်။
လောကီအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လောကုတ္တရာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ဇွဲလုံ့လ ရှိမှ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်မှုဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ လမ်းစဉ်ကို ဖောက်လွှဲဖောက်ပြန် မလုပ်တာကို ဆိုလိုပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ဒီလို ယုံကြည်ချက်မျိုး ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိသူတွေက နည်းလွန်းတယ်။ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါအပေါ်မှာ အလိုက်သင့် စီးမျောရင်း အတ္တတွေကို ရှေ့တန်းတင်သွားကြတာများတယ်။ အများအကျိုး ပရဟိတဆိုတာကို ရှေ့တန်းတင်လို့ ဒုက္ခရောက်သူတွေအတွက် သနားကြင်နာမှုတွေ ပြရမယ့်အစား ငါ၊ ငါ့အိမ်၊ ငါ့မိသားစု၊ ငါ့ဆွေမျိုး စိတ်ချမ်းသာရေးကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ကြတယ်။ ဦးစားပေးကြတယ်။ “အများအကျိုး၊ တိုင်းပြည်အကျိုး ဆောင်ရွက်မယ်”လို့ စိတ်ကူးရှိတဲ့ လူငယ်တိုင်းဟာ အားပေးမခံရဘူး။ “အားလုံး ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲ၊ မင်းအတွက် ဘာအကျိုး ရှိမှာလဲ၊ မင်းမိဘတွေ စိတ်ဆင်းရဲစေမယ့် အလုပ်ကို မလုပ်ပါနဲ့”လို့ တားမြစ်ကြတယ်။ ကဲ့ရဲ့ကြတယ်။ ရှုတ်ချကြတယ်။ အပိုအလုပ်တွေ လုပ်နေသူတစ်ယောက်ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့ခံကြရတယ်။ အများပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက် အမှန်တရားဘက်က ရှေ့တန်းတင် လုပ်ဆောင်မယ့်သူတစ်ယောက်ကို “မင်းအတွက် ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ”လို့ သွားမေးသူဟာ ဘယ်လောက် မိုက်မဲနေပြီလဲ။
အများပြည်သူအကျိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက်သူကို ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချတဲ့ လူမျိုးလောက် တုံးတဲ့၊ ညံ့တဲ့၊ အတဲ့ လူမျိုး ဘယ်မှာများ ရှိသေးသလဲ။ အများအကျိုး ထမ်းဆောင်လို့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို မေ့ထားရက်တဲ့ လူမျိုးလောက် အံ့သြစရာကောင်းတာ ဘယ်မှာများ ရှိနေသေးလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ အရာရာကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြုပြင်ဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကို ပယ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒအရ ဖြစ်တည်မှုဟာ အနှစ်သာရထက် ရှေ့ကျပါတယ်။ ကိုယ့်ကံကြမ္မာအတွက် သူရဲကောင်း မျှော်နေတာ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ထံမှာ ၀ကွက်အပ်ထားတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ တွေးနေမိပါတယ်။
အခြေအနေတွေက ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ ပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကြိုးပမ်းလိုစိတ်များရှိခဲ့ရင် မအောင်မြင်ခဲ့ရင်တောင်မှ လူ့ဘ၀မှာ နေရကျိုး နပ်ပါတယ်။ အသက်ရှင်ရကျိုး နပ်ပါတယ်။ သိက္ခာရှိပါတယ်။ ငါချမ်းသာရေး၊ ငါအောင်မြင်ရေး၊ ငါ့ဆွေးမျိုးတွေ အဆင့်အတန်းမြင့်ရေးကိုသာ ရှေ့တန်းတင်ပြီး အများအကျိုး ဆောင်ရွက်သူကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တတ်တဲ့ လူမျိုးတွေမှာ သိက္ခာတရားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ လူ့အဆင့်အတန်း မရှိပါဘူး။ လူစစ်စစ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အမှန်တရားကို မထောက်ခံရဲရင်တောင်မှ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုတွေ မပြုလုပ်မိဖို့ လိုအပ်တယ်။ “ပသံသိတဗ္ဗံ ပသံသန္တိ၊ ဂရဟိတဗ္ဗံ ဂရဟန္တိ - ချီးကျူးထိုက်သူကို ချီးကျူးတယ်၊ ကဲ့ရဲ့ထိုက်သူကို ကဲ့ရဲ့တယ်”ဆိုတာဟာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ နှုတ်မြွတ်စကား ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိရပ်တည်ချက်ဟာ အားနည်းကောင်း အားနည်းနေပေမယ့် ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သဘောပိုက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ရှေးအခါက အိန္ဒိယမှာ ဘုရင်တစ်ပါး ရှိတယ်။ သူ့နာမည်က ၀ိက္ကမာဒိတျလို့ ခေါ်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်လေး ဆင်းရဲတယ်။ သူ့ဖခင်က လက္ခဏာဆရာကို ပြတယ်။ သူ့ပုံစံက ငပျော့လေး၊ ပိန်တာရိုးလေးဆိုတော့ လက္ခဏာဆရာ ပြောရခက်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာအရဆိုရင် သူ့ဘ၀ဟာ ဘယ်လိုမှ ကောင်းလာနိုင်စရာ အခြေအနေ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် သူဟာ တစ်နေ့မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
တစ်နေ့တော့ သူ ငယ်ငယ်က ပြခဲ့တဲ့ လက္ခဏာဆရာနဲ့ တွေ့တယ်။ လက္ခဏာဆရာက “အရှင်မင်းကြီး … လက္ခာဏာပါ အကြောင်းအရာများနဲ့ အရှင်မင်းကြီးရဲ့ လက်ရှိဖြစ်နေမှုများ အဘယ့်ကြောင့် ဆန့်ကျင်နေရသလဲဆိုတာ ကျွန်ုပ်သိပါပြီ။ ခေတ်က လူကို ဖန်တီးတာ မဟုတ်၊ လူကသာ ခေတ်ကို ဖန်တီးတာပါ။ အရှင်မင်းကြီးရဲ့ လုံ့လ၀ီရိယက အရှင်မင်းကြီးရဲ့ လက်ဝါးမှာပါတဲ့ လက္ခဏာကို ပြောင်းလဲပစ်တာပါ အရှင်မင်းကြီး”လို့ လျှောက်တင်လိုက်တယ်။
မိမိတို့တစ်တွေဟာလည်း ၀ိက္ကမာဒိတျထုံး နှလုံးမူသင့်ပါတယ်။ လေညှင်းလေး တိုက်ရုံနဲ့ ပြိုလဲမယ့် သီဝရီတွေနဲ့ စိတ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ ကိုယ်ရဲ့ လွတ်လပ်မှု၊ ဘယ်လွတ်လပ်မှုမှ ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ တချို့က တော်တယ်။ ထက်မြက်တယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့ကျင့်ဝတ်၊ လူ့သိက္ခာတရား၊ လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာမှု တစ်ချက်မှ မရှိကြဘူး။ လောကကြီးဆိုတာ ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်ထက်မြက်လို့ ကိုယ်ကြီးပွားရုံနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စွမ်းအားတွေနဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အမှန်တရားဘက်ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးမှ လူသားပီသပါတယ်။ သိက္ခာရှိပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ သမိုင်းဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာသာရှိပြီး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဟာလည်း အဲဒီနိုင်ငံမှာ မှီတင်းနေထိုက်သူအားလုံးရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။
နေတာ မကြိုက်လို့ မပြီးသေးဘူး